Valinetine’s day ပေါ်ပေါက်လာပုံ – Alanzayar
ချော့ကလက်က ဘယ်ကပါလာတယ်တော့ မသိဘူး ဖေဖေါ်ဝါရီ တစ်ဆယ့်လေး ဆိုတာ စိန့် ဗယ်လင်ဒိုင်း ကြိုးမိန့်ပေးခံရတဲ့ နေ့လေးပါ
အေဒီ (၃)ရာစု လောက်မှာ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ရိုမန်စစ်ဘုရင် Claudius ဟာ စစ်အင်အားတွေစုဆောင်းနယ်မြေသစ်တွေတိုးချဲ့ရင်း ပါဝါကြီးစိုးခဲ့တယ်..။သူ့လက်ထက်မှာ Britain နိုင်ငံဟာ ရောမအင်ပါယာအောက် ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်..။
Claudius ဟာအမြဲတမ်း နယ်ချဲ့ရင်း စစ်ပွဲကိုပဲဦးစားပေးဆင်နွှဲနေတော့ နိုင်ငံထဲကယောကျာ်းတွေဟာ စစ်ထဲ မဝင်ချင်တော့ ဘူး။စစ်မတိုက်ချင်ကြတော့ဘူး..။ဇနီးမယားတွေ မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့ပဲနေချင်ကြတယ်..။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာတော့ ရောမစစ်သည်တွေ အသေအပျောက်များခဲ့တယ်..စစ်သားသစ်တွေလိုလာတယ်..။
စစ်သည်အင်အားကိုလည်း ပိုမိုတောင့်တင်း ခိုင်မာအောင် လုပ်ချင်တယ်.။ဒါပေမယ့် ယောကျာ်းတွေကလဲ စစ်ထဲကိုမဝင်လိုကြတော့ အခက်တွေ့နေတယ်..။Claudius ဟာစဉ်းစားတယ် ယောကျာ်းတွေဟာ မိသားစုသံယောဇဉ်ကြောင့်စစ်ထဲမဝင်ချင်ကြတာပဲ သူတို့သာ အိမ်ထောင်မပြုကြရင်စစ်ထဲဝင်ကြမှာပဲလို့ မိုက်မိုက်မဲမဲတွေးမိတယ်.. ။
ဒါကြောင့်ပဲ နိုင်ငံတစ်ဝန်း လူငယ်တွေ အိမ်ထောင်မပြုရလို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်..လူငယ်တွေ အတွက် ရက်စက်ပြီး မတရားတဲ့အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ဥပဒေပေါ့…။ထိုဥပဒေကို ဆန့်ကျင့်တဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးပေါ်လာတယ်..။
သူ့နာမည်က Saint Valentine လိုခေါ်ပြီး လက်ထပ်ပွဲတွေမှာ ကောင်းချီးပေးတဲ့ ဘုန်းကြီးပေါ့..။သူဟာတင်းကြပ်တဲ့ ဥပဒေ တွေတားမြစ် ထားတဲ့ကြားမှ လက်ထက်ပွဲတွေကို သိုသိုသိပ်သိပ် စီစဉ်ကျင်းပပေးခဲ့တယ်.။
သူ့ရဲ့ သီးသန့်အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ဖယောင်းတိုင်လေးထွန်းပြီး မင်္ဂလာပွဲကို သူရယ် မင်္ဂလာမောင်နှံရယ် သုံးယောက်သားလျှို့ဝှက် ကျင်းပကြတယ်..။တစ်ညမှာတော့ သတင်းပေါက်ကြားပြီး မင်္ဂလာ ကျင်းပတဲ့အခန်းထဲ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကြတယ်..မင်္ဂလာမောင်နှံ လွတ်မြောက်သွားသော်လည်း St. Valentine ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီး သေဒဏ်ချမှတ် လိုက်ကြတယ်..။
သူဝမ်းမြှောက်သွားတာတစ်ခုရှိတယ်သူထောင်ထဲမှာရှိစဉ်.ရောမမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တွေဟာ ထောင်ထဲကို လာတွေ့ကြတယ် ပြတင်းပေါက်မှာ ပန်းတွေ ကြဲကြမှတ်စုလေးတွေရေးကြ တယ်..။ ပြီးတော့ သူလုပ်ခဲ့တာမှန်ကန်ကြောင်း သူတို့လေးတွေလည်း အချစ်ကို ယုံကြကြောင်း အားပေးထောက်ခံကြတယ်..။
အဲ့ဒီ့ထဲမှာ ထောင်မှုးကြီးသမီးလဲ ပါတာပေါ့..။
ထောင်မှုးကြီး က ခွင့်ပြုတာကြောင့် သူ့ရဲ့ အခန်းထဲမှာ လာတွေ့တယ် စကားတွေ အများကြီးပြောတယ်.။အားပေးစကားတွေပြောတယ်.. နောက် သူသေခါနီးမှာ သူမရဲ့ခင်မင်မှု၊ သစ္စာရှိမှု၊အားပေးမှု တွေကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ “Love from your Valentine” ဆိုတဲ့ မှတ်စုတိုလေး တစ်စောင် ထိုအမျိုးသမီးတွက် St.Valentine က ရေးသားပေးခဲ့တယ် ..။
အေဒီ (၂၆၉) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ သူကွယ်လွန်သွားးခဲ့တယ်.. အသတ်ခံခဲ့ရတယ်..အဲ့ဒီ နောက်မှာတော့ St. Valentine ကို လေးစား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် “” . . Valentine’s Day . . “” ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်..။.
အမှန်တရားလေးသိစေချင်ယုံပါဗျာ.. Credit to original writer….
Previous Article ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အထင်ကရ နေရာများနှင့် ရိုးရာပွဲတော်များ
Next Article ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထူးေဟာစတမ္းၾကီး ဆရာမၾကီး ေဒါက္တာ ေစာယုႏြယ္q